Nagu saabsan - YIXIAN LONGSHAN DHAGAXA DHAQAALAHA CO., LTD
Dhagaxa Longshan waxaa la aasaasay sanadkii 1988, iyadoo la diiwaan galiyay caasimada 10millon yuan.Waxaa ku yaalo Yixian, Baoding City, Hebei oo ku taal Shiinaha Si Longshan looga dhigo shirkad casri ah oo wax soo saar, soo saar, iibin iyo adeeg.
Warshadu waxay leedahay aqoon isweydaarsi wax soo saar casri ah, qalab wax soo saar horumarsan, tas-hiilaad shaqo oo kaamil ah, soosaarka sanadlaha ah ee dabiiciga dabiiciga ah 500,000 mitir murabac ah, 20,000 tan oo ah dhagaxa korantada, 40,000 mitir murabac oo granite ah, dakhliga sanadlaha ah ee $ 3 milyan.
Badeecooyinka laga iibinayo Talyaaniga, Jarmalka, Kanada, Japan iyo in ka badan 50 dal iyo kuwa waaweyn ee gudaha. In ka badan soddon sano oo shaqo adag ah, Longshan wuxuu noqday saldhigga wax soo saarka. Macaamiisha ajnabiga ah waxay u maleeyeen inay caado u tahay inay ka iibsadaan shilalka Shiinaha, oo ay aadaan Yixian, oo kaliya Longshan.
Sannadkii 2000, Longshan wuxuu ka gudbay xaqiijinta nidaamka tayada caalamiga ah ee ISO9001: 2000 marka ugu horreysa aagga waxsoosaarka iyo alaabada dhagaxa ah ee ka soo baxday Longshan waxay u gudubtay dhinac saddexaad ee kormeerka HK ITS. Longshan Stone wuxuu ku guuleystey inuu dalbado Garoonka Birds'Nest ee Ciyaaraha Olimbikada ee Beijing sanadkii 2008 wuxuuna keenay qiyaastii 10,000 oo mitir murabac oo xajmi ah. Stone Longshan wuxuu ka helay amaan sare macaamiisha gudaha iyo dibaddaba alaab tayo sare leh iyo sumcad lagu kalsoonaan karo.
Dhagaxa Longshan waxaa laga faa'iideystay dhigaalka dhagaxa oo la sameeyay balaayiin sano ka hor. Tayada adag ee qallafsan ayaa si dhab ah u go'aamisay xooggiisa foorarsiga sare, cadaadiska-caabbinta, xirashada-caddeynta iyo daxalka-caabbinta. Dhagaxa Longshan waxaa loogu yeeraa maaddada cagaaran ee qurxinta maxaa yeelay waxay ka kooban tahay shucaac yar oo isbarbar dhigaya heerka caadiga ah ee Komishanka Caalamiga ah ee Ilaalinta shucaaca. Wax soo saarka dhagaxu wuxuu la socdaa midabbo dhalaalaya iyo qaabab gaar ah oo lakab ah iyo qaabab kala duwan, sida dusiyeen, dhagxaan likaha, dhagaxa saqafka, dhejiska shabaqa, dhagaxa dhaqanka, mosaic, granite iyo wixii la mid ah. Waxaana loo adeegsadaa dhismayaasha dadweynaha, villa, deyrka, jardiinooyinka iyo dhismayaasha kale si ballaadhan, hillaac dhismayaasha inay noqdaan kuwo xarrago leh oo dadka u keenaya jawi dabiici ah, iyo sidoo kale nooc qalab dhisme casri ah loo qurxiyey oo mooddo leh.
Dhagaxa Longshan wuxuu soosaaray oo naqshadeeyay takhasus cusub oo Yizhou-Pretty Spring, In Chinese Meiquanshi iyada oo in kabadan labaatan sano faham qoto dheer iyo cilmi baaris. waxaana lagu sharfay 25 shati qaran. Nooca Humidifier-guga wuxuu xakamayn karaa qoyaanka baaxada leh ee jidhka bini'aadamka iyada oo dib loo warshadeyn karo, si dabiici ah uumi baxa, iyada oo shaqadu tahay qalajinta saamaxa, kaabista biyaha iyo nadiifinta. Hadda Longshan Stone wuxuu u bilaabay suuq, wuxuuna ku guuleystay sumcad aad u wanaagsan.
Mustaqbalka, Longshan Stone wuxuu had iyo jeer u hoggaansami doonaa mabda'a ah 'in dadka loola dhaqmo si daacadnimo ah, si adagna loola shaqeeyo qalbiga, raadinta tayo sarreysa iyo waxqabad sare, oo ku saleysan deyn wanaagsan' iyo inuu si daacad ah oo ballaadhan ula shaqeeyo macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.